सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार्य हुने : डा. कोइराला «
सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार्य हुने : डा. कोइराला
प्रकाशित मिति : 28 December, 2020 4:23 pm
नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं ६ ले संसद् वि’घटनको वि’रोधमा आज यहाँ र्‍याली र कोणसभाको आयोजना गरेको छ ।
वीरेन्द्र सभागृहबाट निकालिएको र्‍याली नगरपरिक्रमापश्चात् जनआ’न्दोलन चोकमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । सो कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संसद् विघ’टनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार्य हुने बताए।
उनले कांग्रेस वामपन्थीसँग सहकार्य गरी सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पार्दै एक्लै निर्वाचनको तयारीका लागि पालिकास्तरमा विरोधसभा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय सदस्य डा कोइरालाले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सवल बनाउने जिम्मेवारी नेकाको काँधमा आएको छ भने ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले संसद् विघटनबाट संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै विधिको शासन स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकको उपचार कार्यमा लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेश नं १ प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जनताको अधिकार स्थापित गराउन सडक आन्दोलन जारी रहने छ भने । रासस